Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiovana : Ho sahy toa an’i Paul Kagame ve i Andry Rajoelina?
Matetika dia manasa olona avy any ivelany ny fanjakana iray amin’ny fankalazana ny fetim-pireneny toa izao. Tsy ny olona rehetra na ny filoham-pirenena rehetra no asaina amin’izany fa ireo heverina fa mitovy fomba fijery na koa ireo izay tiana halain-tahaka ny fomba fitantanany ny fireneny, na noho ny fihetsiny manokana mampiavaka azy.
Hatramin’ny andron’ny niverenan’ny fahaleovantena teto Madagasikara ny taona 1960, dia nisy foana ny vahiny nasaina manokana na iray izany na ho maromaro.
Ny taona 1960, ary ny faha 29 ka hatramin’ny faha 31 jolay izay nankalazana manokana ny fetim-pirenena Malagasy voalohany teto Madagasikara dia firenena 72 no tonga teto Madagasikara nanatrika izany fety izany, izay avy amin’ny antsoina hoe “pays de la communauté” na ireo firenena nahazo ny fahaleovantena nefa mijanona ho mpiaradia amin’i La Frantsa.
Ny 26 jona 1960 no azo izany fiverenana amin’ny fahaleovantenam-pirenena izany raha toa ka ny 14 oktobra 1958 no nanambaran’ny Géneral De Gaule fa hahazo fahaleovantena i Madagasikara rehefa zanantany frantsay nanomboka ny taona 1896. Ny faha 29 ka hatramin’ny 31 jolay 1960 izay no nanaovana ny fety ho fankalazana izany.
Nanomboka teo dia nisy hatrany ny olona alain-tahaka na antsoina hoe “môdely” ny firenena iray na ny firehana politika iray.Tamin’ny andron’i repoblika faha roa, dia nanao toa izao koa ingahy Ratsiraka, ka ingahy Kim Il Song filohan’ny Korea Avaratra no filamatra tamin’izany ka ny paradisa sôsialista no tanjona.
Tamin’ny andron’ingahy Ravalomanana Marc dia ny fanjakana Allemande sy Amerikainina ary ny Afrika Atsimo no nakany môdely sôsialy ka ny kapitalista no naindraindra. Ingahy Zafy Albert sy ingahy Hery Rajaonarimampianina dia tsy nanakevitra ary tsy nanana fotom-pisainana nalan-tahaka ka dia ireny efa niarahana nahita ireny no nahazo ny firenena tamin’ny fotoana nitondran’izy roalahy ireo.
Ankehitriny ary dia i Rwanda no môdelin’ny fiarahamonina maharesy lahatra an’ingahy Andry Nirina Rajoelina izay filoham-pirenena amin’izao fotoana 2019 izao. Dia io natao vahiny manokana eto Madagasikara ingahy Paul Kagame izay filoham-pirenena amin’ity firenena ity na dia voalaza ny maro fa “terroriste” na koa mpanao didy jadona na koa tsy mpanaja ny zon’olom-belona, nefa manana ny hazon-damosiny ka nanahirana ny komity iraisam-pirenena.
Tsy hiverina amin’ny fampahalalana an’i Paul Kagamé isika izay nahavita “miracle” na fahagagana ara-toekarena sy aram-piarahamonina tany Rwanda nanomboka ny taona 2000 rehefa afaka tao anatin’ny fifamonoana faobe “génocide” izay nahafaty olona 1000 000 mahery tao amin’ity firenena ity ny taona 1994-2000 io.
Tsy misy indrafo ny ady amin’ny kolikoly amin’ity firenena Rwandais ity izay tarihin’ingahy Paul Kagame. Tsy ny mpanao kolikoly tamin’ny fitondrany ihany fa hatramin’ireo fanjakana rehetra nifandimby teo alohany. Tsy misy izany tsy maty manota izany any amin’ity firenena ity ankehitriny. Ny mpangalatra dia tsy misy koa ankehitriny ary efa nandritra ny 20 taona mahery izay. Hatramin’ny fiangonana izay hitan’ity olona ity fa tsy mitondra ho amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena ka manao fitaovana aram- pivavahana ny vahoaka, dia nakantony sy nofoanany avokoa. Noho izany dia fiangonana 6000 ary môske 100 no nofoanany tsy mahazo mamory olona. Tsy misy intsony ny mpanodinkodina volam-bahoaka ary nogadrainy izay rehetra mpitondra fanjakana tany Rwanda ka tafiditra amin’izany. Toa izany koa ny mpanodinkodina harem-pirenena. Tsy nisy kiantrano an-trano izany ary tsy nisy kinamanamana fa rehefa kary dia vandana. Tsy nisy intsony ny antsoina hoe “ baiko midina ao amin’ny fitsarana avy amin’ny mpitondra fa manao ny asany ankalalahana tanteraka izy ireo ary mitsara araka ny lalàna sy ny kaosiansiny.
Vokatr’izany dia mandroso i Rwanda izay tarihin’ingahy Paul Kagame. Izy ity no vahiny manakaja an’i Madagasikara amin’izao fankalazana ny fetin’ny fahaleovantena izao.
Ho sahy hanao toa izany fihetsin’ingahy Paul Kagame izany ve i Andry Nirina Rajoelina izay filoham-pirenena Malagasy ankehitriny? Ho sahy tena hiady amin’ny kolikoly ve ka tsy hanaiky ny tsy maty manota intsony ka hampigadra izay rehetra manao izany na fianakaviany izany na namany? Ho sahy hiady amin’ny dahalo ve ka tsy hanaiky ny famonoana olona feno habibiana ataon’ireo dahalo ireo. Afaka tsy hanaiky be fahatany ny fianakaviambe iraisam-pirenena ve ka tsy ho baikoan’ny vahiny toa ny misy any Rwanda ankehitriny?
Moa ve ingahy Andry Nirina Rajoelina eo anatrehan’izany rehetra izany ka ho môdely toa an’ingahy Paul Kagamé ity ka tsy hanararaotra fahefana amin’ny fampananana harena miafina amin’ny maha filoham-pirenena azy.
Izany rehetra izany sy ny maro tsy ho voatanisa no apetrakin’ny mpanaraka ny raharaham-pirenena amin’ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina amin’izao fahatongavan’ingahy Paul Kagame izao eto Madagasikara.
Ho hitan-tsika ny tohiny!